Dugsiyada Dadwaynaha ee Saint Paul 2015-16
2015-2016 Tusmada Waxyaabaha aad Hubinayso Marka aad Dooranayso Iskuul
Maadaama uu cunugaagu dugsiga bilaabayo markii ugu horaysay, cunugaagu wuxuu isku badalan doonaa dugsiyada, ama cunugaagu wuxuu bilaabi doonaa dugsiga dhexe kadibna dugsiga sare. Hadaba waxaad leedahay istikhyaar aad dugsiyada kala duwan ee St. Pual ugu kala dooran karto cunugaaga si aad u hesho midka ku haboon ilmahaaga iyo qoyskaaga. Shaaqaale af Soomaali ku hadla ayaa diyaar kuugu ah xarunta meelaynta ardayda sanadka oo dhan si ay u caawiyaan waalidiinta Somaaliyeed ee raadinaya dugsi ilmahooda ku haboon oo ay ku qoraan. Hoos waxaa ku qoran akhbaarta guud ee ku saabsan sida aad ilmahaaga ugu dooran karto dugsiga aad rabto. Sidaad ku dooranleheed iskuul:
Akhri School Selection Guide
Eeg skuullada aad dooneysid
Hadii aad su'aal qabtid, ama naga soo booqo cinwaanka 2102 Univeristy Ave W., Saint Paul, MN 55114
Janawari 2015 - Tusmada Xulashada Iskuulada Waxaa Lasoo Saaridoonaa
Janawari 10, 2015 - Carwada Wargalinta Waalidiinta Waxaa Lagu Qabanayaa RiverCenter
Feebarwari 20, 2015 - Maalinta Ugu Dambaysa ee DHAMAAN Araajida Fasalada Labuuxin Karo Waa Jimcaha
Janawari – Feebarwari 2015 - Xaflada Furitaanka Dugsiyada Hoose & Furitaanka Dugsiyada Sare waxay bilaabanaysaa bisha Janawari, fadlan si toos ah iskuulkaaga ula xiriir si aad wixii akhbaar ah uga hesho
Abriil 14, 2015 - Maalinta ugu dambaysa ee araajida loo buuxin karo Aqbalaada Hore ilaa iyo Baaritaanka Caafimaad ee caruurta galaysa Fasalada Xanaanada (Early Admission to Kindergarten Screening).
LAMBARO MUHIIM AH
Si lagaaga caawiyo inaad dugsi dooratid fadlan waxaad wacdaa Xarunta Meelaynta Ardayda (651) 632-3709. Waxaa halkaa jooga oo ku caawinaya qof ku hadla af-soomaali.